Lalan-davitra no nizorana: hanao pao-telo ny tarika R’Imbosa | NewsMada
Lalan-davitra no nizorana: hanao pao-telo ny tarika R’Imbosa
Par Taratra sur 26/10/2018
Mampiavaka an’i Madagasikara sy ny Malagasy ny fananana ny ba gasy. Misy kolontsaina voarakitra ao anatiny. Efa miha mitombo hatrany ireo miezaka mampahafantatra izany. Iray amin’ireny ny tarika R’Imbosa…
Fampisehoana, famoahana rakikira faha-6 ary fivoahan’ilay boky Tiona Bagasy 2. Ireo no indray hitambatra amin’ny « Dia veloma Ikaky sy Ineny », seho an-tsehatra hotontosaina eny amin’ny Espace Nambinintsoa Talatamaty, ny alahady 28 oktobra izao. Hetsika tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny faha-20 taon’ny tarika R’Imbosa rahateo. Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoana amin’io ny fiantsana tononkalo sy ny fikaloana hira tranainy. Ny boky Tiona Bagasy indray, ahitana ireo hira vita solfezy sy solfa miaraka amin’ny kapila mangirana (Cd) mirakitra ny feonkiran’ireo hira vita sorapeo ireo.
Roa ny fikasana lehibe ho fanamarihana ny faha-20 taon’ity tarika ity, ho fampiharana ny vinan’ny Sehatra Ba Gasy (SBG) ka iainan’ny Malagasy ny kolontsaina ba gasy sy ny lohahevitra “R’imbosa mizara”. Ezaka hahatonga ny ba gasy ho harentsaim-pirenena sy eran-tany tsy mivainga (patrimoine culturel immatériel national et mondial). Faharoa, fananganana ivontoerana fikarohana sy fitahirizana ary fampianarana momba ny ba gasy.
Tany amin’ny 50 taona lasa…
Nandia lalan-davitra vao tonga amin’izao dingana izao, raha ny fanazavan’i Mbosa. 50 taona no efa nitrandrahany ny bagasy avy tao amin’ny tarika Ataum (taona 1968) ka hatraty amin’ny Sehatra bagasy (SBG) niforona ny taona 2009. « Nitondra ny kalon’ny fahiny tao amin’ny Ataum izahay », hoy Mbosa. Tao anatin’izany sehatra izany i Prosper Ralaiarimanana sy i Eugène Rahaingoson. Taona 1988 niara-nanangana ny tarika Solika tamin’i Prosper Ralaiarimanana i Mbosa ka izy no filoha voalohany tamin’izany. Folo taona taorian’izay (taona 1998), nitsangana ny tarika R’Imbosa. Saika Maintimolalin’ny Ataum avokoa ny mpikambana ao ankoatra an’i Tojo. Taona 2009, niaraha-nanangana tamina tarika sy mpanakanto maromaro ny Sehatra Ba Gasy ahafahana mampivelatra ny tontolon’ny ba gasy. Ao ny seho sehatra, ny atrikasa sy ny fifanakalozana samihafa, sns.
Tsetsatsetsa tsy aritra no ilazana fa eo amin’ny 70 ny hira efa novelomin-dry R’imbosa anatina rakikira, nampitondrainy ny lohateny “Kalon’Imerina” ary roa ny rakitsary. Rakikira miavaka satria misy boky kely amin’ny fiteny malagasy sy frantsay ary anglisy, manolotra ireo namorona ny hira, ny tononkira, manazava ny tantara manodidina ny hira, sns.